Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Puntland oo gaaray Tukaraq | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Puntland oo gaaray Tukaraq
Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Puntland oo gaaray Tukaraq
Degaanka weli xiiasadiisa colaadeed ay weli sii jiitameyso ee Tukaraq kana tirsan Gobolka Sool ayaa maanta waxaa gaaray wafdi ka tirsan Maamulka Puntland oo isugu jira Wasiiro iyo xildhibaano.
Wafdigan ayaa kormeeray fariisimaha Ciidanka Puntland ay ku leeyihiin degaanada ka tirsan Gobolka Sool gaar ahaan aagga Tukaraq, iyaga oo ku dhiirageliyay in ay difaacaan dhulka Puntland.
Wasir ku xigeenka Caafimaadka Puntland Dr. Faarax Maxamed Warsame oo ka mid ah wafiga ayaa sheegay Somaliland xiisada Tukaraq sida ay u fahmeen in aysan aheyn, welina ay dhowrayaan derisnimada, balse Puntland aysan marnaba aqbaleyn in lagu soo xadgudbo xuduudeeda.
Sidoo kale waxaa warbaahinta hadal siiyay Korneel C/wali Cali shire oo ka mid ah saraakiisha hoggaamineysa Ciidanka Gobolka Sool ee Puntland, wuxuuna sheegay Somaliland in jawaab sax ah ay heli doonto waqti dhow.
Wuxuu kaloo sheegay Sarkaalkan hadii aanay Somaliland joojin faragelinta Puntland ku heyso in ay heli doonto dagaal gacan ka hadal ah oo dhiig uu ku daato, wuxuuna shacabka Puntland ugu baaqay in ay diyaar garoobaan.